ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီမှာ ကားထဲ မွှေးနေစေဖို. ကားအမွှေးနံ.များကို Rocket တွင် မှာ ယူလိုက်ပါ ကားထဲ အမြဲ မွှေးနေစေခြင်းဖြင့် စိတ်ချမ်းသာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘူးကို နှစ်လလောက် ခံမှာပါ။ Jel ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိနိုင်သော အနံ.များ New Car, Ocean, Lemon, Vanilla, Strawberry, Flower ဈေးနှုန်း - 15000 kyats (PreOrder) Delivery free in Yangon PreOrder ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ပတ်စောင့်ရပါမယ်။ ပိုက်ဆံကြိုရှင်းစရာ မလိုပါ။ အဝယ်များပါက မကြာခင် Instock ရောင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Suntech NIBP module, stable and durable compressed air hose and connector, NIBP cuffs of various sizes; Masimo SET, the Goldway in blood oxygen saturation test, is adopted to ensure the best performance; 15 inches Touch screen TFT display with high brightness and rotary knob for operation; Optional functions as EtCO2, 2IBP, AG, LOC, wireless module, build-in printer; Modular design with plug &amp; play modules for various combinations of advanced parameters; Removable lithium battery for continuous operation for4hours;
250000 ~ 250000 Kyats
အိမ်သုံးအောက်ဆီဂျင်စက်။ ပန်းနာရင်ကျပ်သမားများ နာတာရှည်အဆုတ်လေပြွန်ရောင်ရောဂါသမားများခေါင်းတခြမ်းကိုက်တတ်သူများအတွက်အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
Esaote Ultrasound ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်များမှာ Urology,gynecology,ဝမ်းဗိုက်,သားဖွား,အသေးစားအစိတ်အပိုင်း,နှလုံးရောဂါ,endocavity နှင့် application များစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်နည်းပညာ ဖြစ်သည့်အတွက်မြင့်မားသော resolutionနှင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေးစွမ်းဆောင်မှု အမြင့်မားဆုံး ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ Wide clinical applications - can be used in abdomen, urology, gynecology, obstetrics, small parts, cardiology, endocavity and intervention. Advanced digital imaging technologies - excellent image quality with high resolution and high penetration.IP (Image Process) function - help you with adjustment of image parameters fast and easily.TEI (Tissue Harmonic Imaging).TSI (Tissue Speciality Imaging).Max frequency up to 10MHz.17 inches wide screen LCD monitor - realizing high definition images.Transducer technology - high sensitivity, wide band and multi-frequency transducer series.
Vacuum Blood Collection Tube called Gel &amp; Clot Activator Tube, with additive of Gel &amp; Clot Activator, used for for biochemistry and immunology tests, There is gel inside the tube at the bottom. After centrifugation, the gel can separate the serum from the blood cells. Zaw Win International Trading Co.,Ltd မှ EO Gas ဖြင့် ပိုးသတ်ထားသော စင်ကာပူနိုင်ငံထုတ် တစ်ခါသုံးမျက်စိခွဲစိတ်ပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ မှန်ကန်စွာဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာသုံး ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းများနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် အသုံးပြုသော တစ်ခါသုံး Butterfly Blood Collection set များလည်းရရှိနိုင်ပြီး ဖုန်းဖြင့်ဝယ်ယူရရှိလိုပါကလည်း လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးပါသည်။အားကစားသမားများအတွက်လည်း foldaway stretcher &amp; spine board များ လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။နယ်မြို့များမှ မှာယူလျင်လည်း ကားဂိတ်ထိ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Cardioline Defibrillator နှလုံးအကူစက်သည် Image ပုံရိပ်သတင်းအချက်အလက်များပြည့်စုံစွာဖော်ပြပေးပြီးအသုံးပြုသူလမ်းညွှန် messages ပါဝင်ကာမျက်နှာပြင်ကျယ်ပြန့်စွာပါရှိပြီးquality အရည်အသွေးကောင်းမွန်မြင့်မားသောကြောင့်လူနာများအတွက်အထောက်အကူကောင်းဖြစ်သောနှလုံးအကူစက်ကိရိယာဖြစ်ပါသည်။ Provide audible and visual alarms for heart rate violations, VF and VT.Provideastrip printer which annotates waveforms, events, time code.Havea5-lead patient cable as an option toa3-lead cable.Supplied with external re-usable paddles and packs of paper rolls for the printer.
High Quality Advanced diagnostic service
Clinical laboratory tests playacrucial role in the detection, diagnosis and treatment of disease in patients. Laboratory tests are great benefit for assessing the presence, extent, or absence of disease and monitoring the effectiveness of treatment. ﻿We ensure our service provides consistent quality, reliable result and timely delivery.﻿Consultation &amp; Specialist Clinic Service.We provide consultantation services.Paediatrician (Child Specialist),Obstetrician &amp; Gynaecologist (OG), -General Physician -Radiation Oncologist -Surgeon
ခန္ဓာကိုယ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ခေတ္တ၊ခဏအပူပေးရုံမျှ ဖြင့် ညောင်းညာနာကျင်ကိုက်ခဲမှု များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။IL 50 သည် မိမိသုံးလိုသော အချိန်ပမာဏကိုသတ်မှတ်ပြီး အသုံးပြုနိူင်ပါသည်။ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုသော လူကြီမင်းများအနေဖြင့် Beurer Myanmar Co.,Ltd တွင်ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် လက်လီလက်ကား ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
water purifier- ရေသန့်စက်
တပ်ဆင်ရ လွယ် ကူတဲ့ အိမ်သုံး ရေသန့်စက် လေးပါ! ရေတွေထဲမှာ ဂျီးတွေ အညစ်ကြေးတွေကို စစ်ထုတ်ပေးပါတယ်! ရေတွေ ညစ်ဝါဝါ မဖြစ်တော့ဘူး သုံးရတာ အဆင်ပို ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ သောက်ရေအဆင့်ထိ မရပါရှင့်! သန့်ရှင်းကြည်လင်သော သုံးရေအဆင့်ထိသာ သန့်စင်ပေးပါတယ်။ ရေစစ်လေးညစ်ပေနေရင်လည်း ဆပ်ပြာရည်နဲ့ ပွတ်တိုက်ဆေးကြော ပြန်သုံးရုံပဲနော်! အဆင်ပြေချက်ပဲ
Foot Bath &amp; Foot Massage (ခန္ဓာကိုယ်အကြောအခြင်ပြေစက်)
ခန္ဓာကိုယ်အကြောအခြင်များတက်ခြင်းမှ ပြေပျောက်စေပါသည်။အရေပြား(၅လွှာ)အထိ နွေးထွေးချောမွေ့မှု ပေးသည်။တုန်ခါမှု နှင့် ထိတွေ့မှု ကို သိသာစွာ ခံစားရနိူင်ပါသည်။ဝယ်ယူအသုံးပြု လိုသော လူကြီမင်းများအနေဖြင့် Beurer Myanmar Co.,Ltd တွင်ချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့် လက်လီလက်ကား ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
လိုသလို ချိန် မျက်မှန်
ပါဝါရှိသူများအတွက် ပါဝါ အနည်းအများ ပြောင်းတတ်သူများအတွက် မျက်လုံး နှစ်ဘက် ပါဝါ မတူသူများအတွက် လိုသလိုချိန်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မယ့် ပါဝါမျက်မှန်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။ မျက်မှန် တစ်ဘက်တစ်ချက်စီမှာ ရှိတဲ့ လှည့်စရာလေးကို လှည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပါဝါ အနည်းအများကို လိုသလို ချိန်နိုင်ပါပြီ။ ပါဝါ ပြောင်းတိုင်း ဆရာဝန်ဆီ သွားစရာ မလိုတော့ပါ။ ဈေးနှုန်း - 19000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
2 ~3$
Esaote P-8000 Power ECG Machine သည်ကိုယ်ထည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး နည်းပညာမြင့်မားမှုကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်မားဆုံးပေးစွမ်းနိုင်ပြီး display menu မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကွဲပြားသော ဘာသာစကားများ၊အခြားအခြေခံအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောစနစ်များ unitများ ပါဝင်သောကြောင့် အသုံးပြုရန်လွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါသည်။ The P8000 has been conceived asamodular device in order to meet your exact requirements.The unit is available in two different configurations: Basic, which includesaskilful measurement program, and Interpretative, which supports you in diagnosis.Three more options can be enable:Memory option Communication.Module for data transfer to PC by network or modem Thrombolysis software to support therapy advisability.
ခ​လေးများကို အလွယ်​တကူ ချီနိုင်​မယ့်​ ခ​လေးချီစက်​​လေးကို Rocket တွင်​ ဝယ်​လို့ ရပါပြီ။ အလုပ်​မပျက်​ က​လေးကို သွား​လေရာ သယ်​​ဆောင်​နိုင်​ပါမယ်​။ အသုံးပြုရတာ လွယ်​ကူပြီး က​လေးလည်း မပြုတ်​ကျနိုင်​ပါဘူး ​ဈေးနှုန်း - 15000 kyats Delivery free in Yangon 09264686461 ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဖုန်းမဆက်ချင်ရင် Order form ဖြည့်ပြီးလည်း တင်နိုင်ပြီနော် https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
12 ~ 14 $
24 ~ 30 $